IELTS လိုမျိုး အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ချင်ကြတဲ.သူတွေအတွက် ကြိုတင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို. သင်တန်းလေးတခုပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » IELTS လိုမျိုး အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ချင်ကြတဲ.သူတွေအတွက် ကြိုတင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို. သင်တန်းလေးတခုပါ
IELTS လိုမျိုး အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ချင်ကြတဲ.သူတွေအတွက် ကြိုတင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို. သင်တန်းလေးတခုပါ
Posted by khinmintatthu on Aug 11, 2010 in Myanma News, News | 10 comments
အခုခေတ်မှာ အပြင်ထွက်ချင်တဲ.သူတွေများလာတဲ.အတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားဖို.သင်တန်းတွေမေးသင်တန်းတွေတက်တဲ.သူတွေ အရမ်းကိုများလာပါပြီ။နာမည်ကြီးသင်တန်းတွေကိုလည်းအများကြီးတက်လာကြပါတယ်။အဲဒီထဲကမှ မတက်ခင်ကြိုတင်စဉ်းစား ပြီးမှတက်သင်.တဲ.သင်တန်းကျောင်းတခုပါ။ကိုယ်တွေ.ကြုံခဲ.တယ်လို.လဲပြောလို.ရပါတယ်။ အရင်ကဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းမှာဖွင်.ခဲ.ပြီးအခု ၃၅လမ်းအထက်မှာ ဖွင်.ထားတဲ.သင်တန်းမှာ။သင်တန်းနာမည်က ဆ၇ာတိုနီ ဘာသာပြန်ဆရာဟောင်း shell ဦးစီးသော OBF Language School ပါ သင်တန်းတခုလုံးမှာ ဆရာတယောက်ထဲ၇ှိပြီးတော. သူစာသင်တဲ.အချိန်ကတော. တနေ.မှ သုံးနာရီတောင် မပြည်.ပါဘူး။ အတန်းကိုဝင်စမှာ အရင်ကလူတွေရေးထားတဲ.စားအုပ်တွေကို တနေ.တည်းနဲ. ကူးရပါတယ်။ တယောက်ဆိ ကတယောက်ကူးရတော.ဆရာ.ကိုအမှားကိုတောင်မမေးရဲတဲ.ကျောင်းသားတွေအတွက်အမှားကိုဘဲကူးရပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော. ရင်.သီးမောက်မာတာဖြစ်ပြီး သူ.စကားသည်သာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းနဲ. ပက်သက်တဲ. ကိစ္စအ၀၀ကိုလည်း ကျောင်းသားတွေကဘဲလုပ်ရပြီးတော. သူ.အိမ်နဲ.ပက်သက်တဲ.ချက်တာ ပြုတ်တာ ထမင်းချက်ပေးတာ တွေထမင်းခူးပေးတာ တွေပါကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက အကုန်လုပ်ပေးရတာပါဘဲ။ အစေခံတယောက်လိုဘဲလုပ်ပေးရပြီးတော. အကောင်းတော. အပြောမခံရပါဘူး။ သူ.ဆီရောက်မှတခါမှ မကြားဖူးတဲ. အဆဲအဆိုအ ပြောတွေကိုကြားဖူးပါတယ်။သင်ကြားမှု.ပုံစံကလည်း senior junior သင်ကြားပေးတဲ.ပုံစံပါ။ ကျောင်းသားတွေကသူ. ဆီမှာပင်ကို ပါလာ တဲ.အသိညာဏ်ကနေတိုးတက်လာတာ မရှိပါဘူး။ ပိုဆိုးတာကအညှိုးခံရတာပါဘဲ။သူမကြိုတ်တော.ယင်နေ.စဉ်နှင်.အမျှညျိုးတဲ.စကားတွေပြောခံ၇တာပါဘဲ။ယေက်ျားလေးဆိုလို.ကတော. အထိုးခံဖို.ပြင်ထားပါ။ တိုက်ကွန်ဒို နည်းပြ ဟောင်းဆိုတော. အထိုးအကြိတ်ခံရတာ လည်း မိန်းကလေးဆိုယင်တောင်မလွတ်ပါဘူး။ သူတို.လင်မယားပြသနာမှာလည်း အနေမတက်ယင်ကြားညပ်ပါပြီဘဲ။ တနေကုန်တက်ရတဲ.အတန်းဖြစ်ပြီးတော. သူဖြေခိုင်းတဲ.လမှာဖြေချင်ချင်မဖြေချင်ချင်ဖြေ၇ပါတယ်။စာမေးပွဲနိးတဲ.လမှာတော. ည၉နာရီလောက်အထိနေခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ.နေ.ခင်းမှာတော. ထိထိရောက်ရောက် မသင်ပါဘူး။ အိပ်ခိုင်းတာ များပါတယ်။ ဘာလို.ညပိုင်းခေါ်တာလဲဆိုတော. ညပိုင်းသူတခြားသင်တန်းတွေသွားသင်ယင် သူ.အိမ်ကိုစောင်.ပေးတဲ.သူ သူ.သမီးကိုထမင်းကျွေးရေချိုးပေးမဲ.သူမရှိတာကြောင်.ပါ။ဒါကြောင်.မို. နောင် အင်္ဂလိပ်စာတက်ချင်တဲ. ကျောင်းသားတွေအတွက် မတက်ခင်သေချာ စုံစမ်းပြီးမှတက်သင်.တယ်.သင်တန်းပါ။
စိတ်ပျက်စရာပဲနော် သင်တန်းကိုသင်တန်းနဲ့ တူအောင်မှမလုပ်တဲ့ဆရာပဲ ။ သူလည်းကြာကြာဒီလိုဆက်လုပ်ရင် ဒီလောက က ထွက်သွားရမှာပါ ။
ဒီသင်တန်းက အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်ပျက်နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးခုငါးနှစ်ကတည်းက ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ အစောပိုင်းနှစ်တွေတုန်းက အဲဒီလောက် မဆိုးသေးဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှ ပိုဆိုးလာတာပါ။ သူ့ပြောပုံအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ သူ့ထက်သာတဲ့သူ မရှိဘူးတဲ့…။ အဲဒီလိုမျိုး။
သူဆီမှာ တက်ဖူးပါတယ် အဲဒီလိုပါဘဲ ဆရာတယောက် ဖြစ်ဘူးတော့ သိပ်တော့ မပြစ်မှားချင်ဘူး သူဆီမှာ ကျူရှင်သွားတက်မှဘဲ လက်သီးကို ဘယ်လိုထိုးရလဲ ဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့တော့ ထိုးတတ်ပါပြီ။ အရင်ကတော့ စကားပြန်ဟောင်းတယောက်ပါ လောကမှာ သူလောက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တတ်သူမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ သူကို ပြန်မေးရဲတဲ့ ကျောင်းသားမရှိပါဘူး။ တော်တော်လေးကို အကျင့်စရိုက်ဆိုးပါတယ်။ စာမေးတာ မဖြေရင် မကြိုက်ဘူး ဖြေပြန်တော့လည်း သူလိုရင်းကို မဖြေဘဲ ကျော်ဖြေလို့ ဒီအပျိုကြီး ယောကျားမယူဘဲ ခလေး မွေးချင်တယ်တဲ့ အပြောခံရတဲ့ မိန်းခလေးက အသက် ၂၃လောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ သူသားက အခု လက်ရှိ သြဇီမှာ ရောက်နေပါတယ်။ သူ့မိန်းမကတော့ ဆင်ကိုယ်လုံးနဲ့ အကျီသေးသေးလေးတွေ ၀တ်ပြီး ကျောင်းသူတွေကို သူလိုမျိုး ခလေးဆန်တဲ့ အကျီမျိုးတွေ ၀တ်ဖို့ အလှ အပ ပြင်ဆင် နေထိုင်ဖို့ လေဖောင်တတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ သူသမီးကတော့ အဲဒီ တုန်းက ပေါက်စနလေးပါ။ သမီးလေး စရိုက်ကလည်းတော်တော် ဆိုးပါတယ် လူသာ ငယ်တာ ကျောင်းက လူတွေကို သူ အဖေပုံစံမျိုး လုပ်ချင်တယ်။ စိတ်မထင်ရင် လိုက်ဆိတ်တယ် လက်သည်းရာတွေ တောင်ထင်ကုန်တယ်။ သူအဖေကို ကြောက်လို့ ဘယ်သူမှ ပြန်မလုပ်ဘဲ မသိသလိုနေနေကြရတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ ကြိမ်ဆဲကြတယ် သူ့ သမီး ကျမှ လင်မယူဘဲ ကလေးမွေးခိုင်း ပြီးတော့ အရွယ်မရောက်သေးဘဲ ယောကျားယူခိုင်း အဲလိုမျိုး ပြောတယ်။ အတန်းချိန်ကို မလေးစားပါဘူး သင်ချင်သင်တယ် မသင်ချင်ရင် အတန်းချိန်လုံးဝ မသင်ဘဲ အချင်းချင်း စကားပြောခိုင်တယ် အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့။ ကြီးကြပ်သူမရှိတော့ အဆင်ပြေသလိုပြောတော့ စကားပြောတော့ သွက်ပါရဲ့ အမှားများစွာနဲ့ ပြောချင်သလိုပြောနေကြတာ ဒီလိုနဲ့ အောင်ချက်တွေ ကျကျလာတယ် ကျောင်းသားတွေ ညံ့ညံ့လာတယ်လို့ ကျိန်ဆဲတယ်။ ပြောမယ်ဆို အများကြီးပါ။ ပေးရတာနဲ့ တန်အောင် စိတ်ကျဉ်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်။
IS အတွက် အင်းစိန်လမ်းမပေါ်က စံပြ မှတ်တိုင် စံပြရုံအနီးက incentive class ကို တက်စေချင်ပါတယ် English သတင်းစာ အယ်ဒီတာ ဟောင်းတဦးပါ။ IS ကိုလေ့လာရာမှာ
အခြေခံ4skills တော့ ရထားမှ သင့်တော်ပါမယ်။
mandy hlaing says:
အဲဒီသင်တန်းက ကောင်းလား၊ ကောင်းတယ်ဆိုရင် တက်ချင်လို့ပါ။ အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါလား။
သူ့ ရဲ့hand chain တွေ၊ လက်စွပ်တွေ အကြောင်း ကြွားပြီးစာမသင်တာတွေလဲရှိသေး။
သူ့ ရဲ့ ပြောဆို ပုံတွေက ကျူရှင်ဆရာမလုပ်ဘဲ နတ်ကတော် လုပ်ဖို့ပဲ ကောင်းတယ်။
သြစီ ကိုလဲလင်ရောမယားရောရူးနေတာလေ၊ သူ့ မိန်းမရဲ့အစ်မ အသက် ၄၀ ကျော် Dagon University ကဆရာမက ကလေး ၂ ယောက်အဖေ တခုလပ် ကြီး ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ယူပြီး တူ၊ တူမ ၃ ယောက် ကို အပါခေါ် ၊ သြစီ ရောက်ဖို့ရင်းလိုက် ရ တယ်၊
သူ့သမီး ကြီးလာရင် ဘယ်သူနဲ့ ပေး စားပြီး ဘယ်လိုပို့ အုံးမလဲမသိဘူး၊ သူ့ မိန်းမက သြစီ ရူးမ တွေအတွက်လဲ လင်ပွဲစားလုပ်တယ်။ အကောင်းတော့ရမယ်မထင်နဲ့ တခုလပ် ကျပန်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ ပဲရမယ် ။ ။
အဂ်လိပ်စာ တစ်ကယ်တတ်ချင်ရင် ဆရာကြိး
If you want to improve your English,
စာရေးတတ်ချင်ရင် dictionaries များများဖတ်
စကားပြောတတ်ချင်ရင် radio များများနားထောင်နော်
ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာရွေးချယ် စရာသင်တန်းတွေအများကြီးပါ.ဒီလိုပြောပြတော့လဲ နောင်ကလေးတွေကိုပြောပြလို့ရတာပေါ့.ကျေးဇူးပါ.
အင်္ဂလိပ်စာ ကဆရာဘယ်လောက်ကောင်း ကောင်း self-study မလုပ်ရင် မတော်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်.အရင်တုန်းက ဟိုသင်တန်းကောင်းနိုး ဒီသင်တန်းကောင်းနိုးနဲ့speaking သင်တန်းတွေ စုံအောင်တက်ဖူးပါတယ်.ဆရာကောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ ဘူးပါရဲ့.။Pamela ဘကျော် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆရာမကြီးဆီမှာလဲ တက်ဘူးပါတယ်။ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းအောက်ဘလောက်က ဟိန္နူ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုမှာတင်တာပါ.တော်တော်အသက်ကြီးပါပြီ.ခုဆို မရှိလောက်တော့ ဘူးထင်တယ်။ဆရာမက ဗမာလိုတောင်ပြောတာမတွေ့ ဖူးဘူး။ဘယ်မှာပဲသင်သင် မပြောမဖတ်မလေ့ကျင့် ရင် အကျိုးမရှိဘူးထင်တာဘဲ.အင်္ဂလိပ်စာကောင်း ဘို့ ဆိုရင် ပညာေ၇းစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်မှ ရမယ်.စော်ကားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.ကလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲံ့ဆရာ ဆ၇ာမတွေကိုယ်တိုင် က အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူခပ်ရှာရှား ရယ်.ကျတော်တို့ ဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို သူငယ်တန်းက နေဘွဲ့ ရတဲံ့ အထိသင် ခဲ့ရတာပါ.အိန္ဒိယ တွေ ဖိလစ်ပိုင် တွေ အင်္ဂလိပ်တော်တော်ကောင်းကြပါတယ်.သူတို့ကိုမေးကြည့် တောါ အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်မှာ သင်တာလဲလို့ မေးကြည့် တော့ ကျောင်းမှာလို့ပဲဖြေတယ်။အပြင်သင်တန်းလဲမတက်ပါဘူးတဲံ့.ဒါဆိုဘာလို့ အင်္ဂလိပ် ကောင်းနေလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဓိကက
No wonder there are still teachers like the Guru of Angulimala who do not deserve respect and some teachers teach only for money… Anyway, hopefully, students who really want to study English there can avoid this kind of class…
When we were young, we used to study English for further Education abroad too. When I studied for my TOEFL test, there were excellent teachers like TOEFL Khin Aye Pwint. I still remember what she said… This is what she said ” My class only guides you for TOEFL preperation but if you do not pratice, don’t even think of getting pass rate” (that means forget about higher score).
Yes, all the students studying TOEFL or IELTS or even GCE, you need to praticealot. Check for the latest guide books, read all topics (even some articles/topics may not be relevent to you), listen to the news (of course in English) and practicealot for essay…When I sat for the TOEFL test, the topic for Essay was “Why should the Govt use money to study other planets?”
So, classes are not the only place you can prepare for the tests. You can also do it by yourself (of course you must know the basic grammar).